Spooky Ihe na mmetụta n'ihi na gị na Halloween Videos
1.1 Olee otú Mee
1.2 Video mmetụta
2.2 Halloween ugu
4. Ndị ọzọ
4.2 Halloween Akụkọ
4.3 Halloween na akwụkwọ ahụ aja
Ifufe na-etolite oyi. The ụbọchị na-eto eto obere, na ihe nile epupụta na me udo dị otú ahụ na ndụ ofụri okpomọkụ ugbu a akpọnwụ akpọnwụ, mgbanwe, na-ada. Yeah, ọ bụ na oge nke afọ ọzọ.
Dị ka oké oge maka akụkọ nke enchantment, karịrị nke mmadụ, na unexplained, m dị nnọọ a n'anya oge nke afọ. N'ezie, ị na-adịghị mkpa ọ bụla karịrị mmadụ ike ma ọ bụ nnukwu Halloween mmefu ego ike ezigbo video mọ ma ọ bụ na-eje ije nwụrụ anwụ - ị nwere ike ime ka gị onwe Halloween videos enweghị agbasa gị Piggy akụ. Ebe a bụ ụfọdụ egwu nkiri mmetụta n'ihi na ị na-agbalị si.
Green ọkụ mgbe niile na-abịa na ndị amoosu, fairies na ndị ọzọ na ụdị anwansi na ọjọ. Ime a green ọkụ bụ nnọọ a mfe atọ nke onwu. Niile ị chọrọ bụ boric acid, nke nwere ike dị na ọtụtụ na-echekwa, na methanol ma ọ bụ methyl mmanya, na-eje ozi dị ka a mmanụ ụgbọala ọgwụgwọ maka automotive onunu. Lee ndị nzọụkwụ:
1. Yet a obere boric acid n'ime ọkụ na-adịghị ize ndụ akpa.
2. Tinye a obere ego nke methanol, ịbụ ịkpachara anya iji zere awụfu ọ bụla na aka gị.
3. Ìhè ọkụ!
Ọ bụ nnọọ mfe ike a mọ mmetụta. Niile ị chọrọ bụ a video nchịkọta akụkọ pụrụ iji iche iche egwu na mwube opacity. Ebe a na-abịa nzọụkwụ:
1. Mee gị igwefoto na-ede ogbugba. Ị kwesịrị ị na gbaa idaha ugboro abụọ: otu bụ na-enweghị mọ na ọzọ na mọ omee. Ọ bụ nke dị oké mkpa na ma na-ewe na-gosikwa identically, wee na-ndabere ka na adịghị akpali igwefoto na niile.
2. Import ma na-ewe nke ogbugba n'ime gị video edezi software. Na-etinye efu ogbugba ke akpa video track na mọ gbara na nke abụọ track.
3. Gosiri opacity nke mọ gbara iji nweta ihe kacha mma n'ihi.
Ndị kasị ewu ewu pụrụ iche mmetụta maka spooky Halloween video ka mgbe e na-eme ka adịgboroja ọbara. Google "-esi mee ka adịgboroja ọbara" ga-gbapụta tọn ụzọ, ma ndị kasị nkịtị uzommeputa nke na-eme nke a bụ ka ndị a:
1 cup ọka sirop
1 tablespoon mmiri
2 tablespoons uhie nri agba?
1/2 tablespoon nke green nri agba?, Nke na-eme ka ọ na ihe ọbara-dị ka
E wezụga ndị Ezi ntụziaka, e nwekwara iche iche nke dijitalụ ọbara dị ka ọbara splatters, bullet oghere na ndị ọzọ na post-mmepụta aghụghọ. Ị nwere ike mfe chọta dị iche iche tupu matted dijitalụ ọbara mkpachị nyere site ụlọ ọrụ dị ka Motiondrops na Video Copilot, nke nwere ike mfe composited n'ime gị footage.
Cheta na ọ bụ ezie na ụfọdụ dijitalụ ọbara ese akwa, ị ga-akwụ ụgwọ uche pụrụ iche na agba mgbazi. Na-enweghị-ewere n'ime akaụntụ ọkụ ọnọdụ nwere ike ibibi nro.
Adịgboroja Isi Parts
Akụkụ ahụ nwere ike ịbụ ihe ọzọ spooky echiche maka gị Halloween video. Na e nwere ụfọdụ mfe ụzọ mezuo nke a na dị nnọọ ụfọdụ kichin Efrata. The Ezi ntụziaka ndị dị ka ndị:
2 tablespoons ọka starch
4 teaspoons mmiri
2-5 tụlee red nri agba?
1/2 teaspoon koko mix (na marshsmallow bụ ezi)
Ugbu a mix ọka starch, nri agba? Na mmiri ọnụ. Ekem mix na koko ntụ ntụ. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na koko Nleta-awụba n'oké osimiri clumps, dị ka ha anya dị ka egbochi mkpụkọ nke ọbara. Wee pịa ngwakọta megide n'akụkụ nnukwu efere na-etolite na ngwa shapes iji mkpịsị aka gị. Iji igba ochichiri akụkụ, ị nwere ike mix a-awụba n'oké osimiri ọzọ ọka starch ma ọ bụ Coca mix.
Égbè eluigwe na àmụmà Mmetụta
Ndị kasị mma Halloween videos-emekarị-ewere ọnọdụ na a ọchịchịrị na oké n'abalị. Iji tọọ ọnọdụ gị Halloween videos, tụlee nke a mmetụta. Ọ bụ n'ezie mfe ka ịgbakwunye égbè eluigwe na àmụmà mmetụta dị ka ogologo oge dị ka i nwere video edezi software dị ka iMovie, nke na-enye ndị a iche iche video mmetụta.
Olee otú Mee Halloween Videos site ná mmalite ruo Ọgwụgwụ
Olee otú Mee a Halloween ugu maka Beginners
5 Spooky Halloween Cartoons maka Na, kpọrọ asị ma High-gosiri
Top 10 World Cup Songs na Olee otú Download (2014 World Cup Songs gụnyere)
Olee otú Wepụ Audio Site A DVD
Nweta Best MetaX Alternative
Top 20 Mma Video Sites Ịmụta Mma Atụmatụ
Olee otú Tinye Music (Background Music) ka Video
Olee otú iji tọghata ASF ka MP4
> Resource> Video> Spooky Ihe na mmetụta n'ihi na gị na Halloween Videos